I'll post burmese guys naked photos as much as I can.
Pls send me burmese guys photos if u have via "burmesegay@gmail.com" to make this blog more liveful.
ဒီဆိုဒ်က ဂေးတွေအတွက် သီသန့် ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ။ ယောကျာ်းစစ်စစ်များအတွက်မဟုတ်ပါ။ ကို့ကိုယ်ကို ယောကျာ်စစ်စစ်လို့ ယုံကြည်ရင် ဆက်မကြည့်ဘဲ ပိတ်လိုက်ပါ။ Comment တွေမှာ ဖုန်းနံပါတ်တွေ မတင်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
လိုးတဲ့ကားတွေ ကြည့်ပြီး လီးတောင်နေပီ။ထုလိုက်​တာ လ​ရေ​တွေကို ပန်းထွက်​​ရောဗျာ။
-မပို့ဖြစ်​တာကြာလို့ ပို့လိုက်​တယ်​။ ​ဘော်​ဒါ​တွေ စိတ်​၀င်​စားရင်​ အ​ကောင့်​ထားခဲ့ပါ။ add လိုက်​မယ်​။ လီးက​တော့ နည်းနည်းကြီးတယ်​။ ကချင်​ဗမာ လီး။ မြည်းချင်​ရင်​ ချိတ်​လိုက်​။ အဆင်​​ပြေရင်​ ဆက်​​ပြောတာ​ပေါ့။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ... Posted by
Reactions: My Friend Story
အဲ့ဒီကောင်လေးကို စသိခဲ့တာ အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုမှာပေါ့… အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အခုလိုမိုဘိုင်းအင်တာနက်တော့ သိပ်မပေါများသေးတော့ အပြင်ကအင်တာနက်ဆိုင်တွေကို အားကိုးရတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ……တစ်နေ့တော့ ကျွန်တော့ G-Talk ကိုနာမည်တစ်ခုနဲ့လာ add ထားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း လက်ခံလိုက်တာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာတင် စကားပြော မိတ်ဆက်ဖြစ်ကြပြီး onlineပေါ်မှာရင်းနှီးသွားတယ်။ အချစ်အကြောင်းတွေ မိသားစုအကြောင်းတွေ ပညာရေးအကြောင်းတွေ အားလုံးရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်… ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ ကိုယ်ဟာတစ်ဆိုင်ထဲမှာတင်ထိုင်ပြီး Chat နေမိကြတယ်ဆိုတာ မသိဘူး…။ နောက်တော့ တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ကိုယ်နဲ့သူ အတူဘေးချင်းယှဉ်ထိုင်ပြီး အင်တာနက်အသုံးပြုမိတဲ့နေ့တစ်နေ့ရောက်လာတယ်။ အမှတ်မထင်သူ ကွန်ပြူတာ screen ကိုကြည့်လိုက်မိတော့ ပထမတော့ အံ့သြသွားမိတယ်။ သူကတော့ ကိုယ့်ကိုမသိသေးဘူး။ နောက်တော့အရင်သိနှင့်နေတဲ့ ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအရူးလုပ်မိတယ်။ ဒီနေ့ဝတ်လာတာ ဘာအကျီအရောင်ဆိုတာတွေ ဦးထုပ်ဘယ်အရောင်ဆောင်းလာတာတွေ ဘောင်းဘီဘယ်အရောင်ဝတ်လာတယ်ဆိုတာတွေ ပြောပြတော့ သူကျွန်တော့ကို လိုက်ရှာတယ်။ သူ့ကိုနောက်ချင်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တစ်လလောက်အထိကျွန်တော်ဘယ်သူဆိုတာမပြောပြဘူး…အွန်လိုင်းမှာပဲ စကားတွေပြောဖြစ်ကြတယ်။ နောက်တော့ သူကကျွန်တော်နဲ့ အပြင်မှာတွေ့ဖို့ တောင်းဆိုလာတယ်။တွေ့ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအင်တာနက်ဆိုင်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုမှာ တွေ့ဖြစ်ကြပြီး စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ ထူးခြားတာက g-talk ထဲမှာ စကားတွေအရမ်းပြောသလောက် အပြင်မှာတော့ ကျွန်တော့ကိုရှက်နေဟန်တူတယ်။ မေးမှပြောတယ်။ စကားစပေးမှပြောတယ် ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော့ကို နက်မှောင်စူးရှတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ငေးကြည့်နေတတ်တယ်။ ပြောရဦးမယ်ဗျာ… အဲ့ဒီကောင်လေးဟာ ကျွန်တော့်ထက် သုံးနှစ်လောက်ငယ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရပ်ကကျွန်တော့ထက် အရပ်လေးလက်မလောက်ပိုမြင့်တယ်။ အသားညိုပေမယ့် စိုပြေတဲ့အသားအရေရှိတယ်။ မျက်နှာမှာ ဘာအပြစ်အနာအဆာမှမရှိပဲ မနာလိုချင်စရာကောင်းလှအောင် ချောမွတ်နေတယ်။ ထူခြားချက်က နှာဖူးအလယ်လောက်မှာ မှဲ့တစ်လုံးရှိတယ်။ ခြေချောင်းနဲ့လက်ချောင်းကလေးတွေဟာ လှပစွာသွယ်ပြောင်းနေတယ်ဗျ… ။ နေ့တိုင်းစက်ဘီးစီးပြီး လျှောက်လည်ဖြစ်တယ်။ လူရှင်းတဲ့ နေရာတွေ စက်ဘီးပတ်စီးပြီး စကားတွေပြောဖြစ်ကြတယ်။ ညဆို ပန်းခြံတွေထဲ ထိုင်ဖြစ်ကြတယ်။ အတူထိုင်ဖြစ်ကြရင် သူကကျွန်တော့ကို မှီထားတတ်တယ်။ ယောင်္ကျားလေးခြင်းဆိုတဲ့ အသိရှိပေမယ့်ကျွန်တော့ကို မှီထိုင်တဲ့အခါမျိုးဆို ရင်တွေ တစ်ဒိတ်ဒိတ်နဲ့ ခုန်နေမိတယ်။ ခေါင်းစောင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင် သူ့ပါးပြင်နဲ့ ကျွန်တော်နှာခေါင်းကပ်မိပြီး နမ်းမိမလိုဖြစ်တော့စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာမိတယ်။ ရင်တွေပူသလို အာခေါင်တွေခြောက်လာတယ်။ သူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စကားသိပ်မပြောပဲ ကျွန်တော့ကိုသာ ငေးကြည့်နေတတ်တယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ တစ်ခုခုကိုပြောချင် ဖြစ်ချင်နေတယ်ဆိုတာ ဖတ်မိနေတယ်။ တစ်ရက်တော့ အလည်လွန်ပြီးတော့ မိုးအရမ်းချုပ်သွားတယ်ဗျာ… သူကမနက်ဖြန်ကျောင်းပိတ်တော့ ကျောင်းသွားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး စကားစလာတယ်။ ကျွန်တော်ကလဲ ဒါဆို အစ်ကို့အိမ်လိုက်အိပ်ပါလားလို့ ပြောလိုက်တော့ သူကအလွယ်တကူပဲ ခေါင်းညိတ်တယ်… ဒါနဲ့အိမ်ကိုခေါ်လာတယ်…… မိုးကတော့ အတော်ချုပ်နေပြီ…… ကျွန်တော်နဲ့အတူပဲ အိပ်ယာထဲဝင်ကြတယ်…… (၂) အစကတည်းက ရင်တွေတစ်ဒိတ်ဒိတ်နဲ့ခုန်နေတဲ့ကျွန်တော်ဟာ သူနဲ့အတူအိပ်ယာဝင်တော့ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ အေးစက်သည်အထိဖြစ်လာမိတယ်။ သူခန္ဓာကိုယ်က Cute Plus လိုးရှင်းအနံ့သင်းသင်းဟာလည်း ကျွန်တော့စိတ်ကို ရီဝေယစ်မူးစေလှတယ်။ သူက အခြားတစ်ဘက်ကို လှည့်ပြီး ဘေးစောင်းအိပ်နေတော့ ကျွန်တော်က မသိမသာနဲ့ သူခါးလေးကို ကိုင်လိုက်တော့ နည်းနည်းတွန့်ခနဲဖြစ်သွားတယ်…။ အဲ့ဒီနောက် ကျွန်တော့ ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်…။ မျက်လုံးကတော့ မှိတ်ထားတယ်…။ သူအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေတယ်။ ကျွန်တော့မျက်နှာနဲ့ သူမျက်နှာဟာ နှစ်လက်မလောက်တောင် မကွာတော့တာမို့ သူရှုသွင်းထုတ်နေတဲ့ ပူနွေးနေတဲ့လေပူတစ်ချို့ကို ကျွန်တော် ရင်ခုန်စွာပဲ ခံစားမိနေတယ်…။ အဲ့ဒီလိုပဲ ကျွန်တော် ရင်ခုန်သံတွေမြန်လာတာနဲ့အတူ ညီငယ်ကလေးဟာလဲ အထိန်းအကွပ်မဲ့နိုးထလာတယ်…… ကျွန်တော်လဲ သူ့လက်ကိုဆွဲယူပြီး ပေါင်ကြားထဲကို သွင်းထားလိုက်တယ်…။ သူကအလိုက်တသိနဲ့ ကျွန်တော့ ညီငယ်ကို ဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်ထားတယ်…။ သူ… မျက်လုံးဖွင့်လာပြီး တိုးတိုးလေးကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်… "အကို… ညီ့ကိုချစ်နေလား" တဲ့…… ကျွန်တော် အချစ်ဆိုတာကို ဇဝေဇဝါဖြစ်နေပေမယ့် သူ့အမေးကိုခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်မိတယ်… အဲ့ဒီနောက် သူက ကျွန်တော့ ဘောင်းဘီကို တဖြည်းဖြည်းဆွဲချွတ်လိုက်တယ်… အကျီဝတ်ထားပေမယ့် ကျွန်တော့အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ဗလာဖြစ်သွားတာနဲ့အတူ ညီငယ်ဟာလဲ အစွမ်းကုန်ထောင်မတ်နေပြီ… သူက တဖြည်းဖြည်းအောက်ကို လျောဆင်းလိုက်ပြီး သူ့ပါးစပ်နဲ့ ပြုစုပေးတယ်… အဲ့ဒါပြီးတော့ နောက်ပိုင်း … ကိုလည်း လျှာနဲ့ထိုးကလိပေးတယ်…… ကျွန်တော် အရမ်းအားနာပေမယ့် သူ့ရဲ့ပူနွေးစွတ်စိုတဲ့ လျှာဖျားနဲ့ထိုးကလိပေးတဲ့ ကောင်းလွန်းလှတဲ့ အထိအတွေ့အရသာကို မငြင်းပယ်နိုင်သလို ငြင်းပယ်ဖို့ ဆွံ့အနေခဲ့မိတယ်…… သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့အကျီပါချွတ်လိုက်ပြီ… တစ်ဆက်တည်းဘောင်းဘီကိုပါကျွန်တော် ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်… အကို ညီ့ကို -ိုးပါတော့တဲ့……ဆက်ရန်…… ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ... Posted by
သူနာမည်က မျိုးဇော် ကျနော်နဲ့တစ်ရွာတည်းသားပေါ့ အသားဖြူဖြူ၊ နဲနဲပိန်တယ် သူ့မှာအစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိတယ် ကျနော်နဲ့ဆို သူကငယ်တယ် ၄ နှစ်လောက်ပေါ့ သူနဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပုံလေးကိုပြောပြအုံးမယ် သူတို့ညီအစ်ကို အသားဖြူကြတယ်ဗျ ကျနော်ကလည်း အသားဖြူတဲ့သူဆို သိပ်ကြိုက်ကိုဗျ သူ့ဖင်လေးကိုမှန်းမှန်းပြီး တစ်ယောက်ထဲအာသာဖြေနေကြလေတစ်နေ့တော့ကျနော့ဆုတောင်းပြည့်ခဲ့တယ်ဗျဖြစ်ပုံက ဒီလို ကျနော်တို့နေတာက တောဆိုတော့ဗျာ Video ကြည့်ချင်ရင် ရုံကိုသွားကြည့်ရတာပေါ့ တစ်နေ့ကျနော် video သွားကြည့်တယ် ကျနော်ရောက်ပြီးခဏကြာတော့ ဇာတ်လမ်းစတယ်ပေါ့ဗျာ ဇာတ်လမ်းစပြရင် မီးမှိတ်လေ ရုံထဲမှာမီးမမှိတ်ခင် ကျနော့ဘေးကို လူတစ်ယောက်လာထိုင်တယ် ကျနော်လည်း မကြည့်လိုက်ပါဘူးဗျာဘယ်သူဆိုတာ ဒါပေမဲ့အဲဒိသူက အစ်ကိုရောက်တာကြာပြီလားလို့မေးသံကြားလို့ကြည့်ုလိုက်တော့သူဖြစ်နေတယ် ဟာာာာာာာာာ အရမ်းဝမ်းသာလိုက်တာဗျာာ ကျနော်လဲ မကြာသေးဘူးညီလို့ပြောလိုက်တယ်ကဲကျနော် ဇာတ်လမ်းကိုစိတ်မပါတော့ဘူး သူ့ကို အာရုံစိုက်လိုက်တယ်ညီနေရာ ကျပ်နေရင် ကို့ရှေ့လာထိုင်လေဟုတ် ကျေးဇူးအစ်ကိုရပါတယ်လာရှေ့ကထိုင် (အကြံဆိုးကြီးနဲ့ပေါ့)သူကျနော့ရင်ခွင်ထဲရောက်လာတယ်နည်းနည်းကြာလာတော့ ကျနော်လဲသူကို့ဇာတ်လမ်းစတယ် သူ့ဖင်လောက်ကို မတော်တစလိုနဲ့ ခြေထောက်လေးထိုးသွင်းလိုက်တယ် ရတယ် နောက်ပိုင်း ခြေချောင်းလေးတွေကိုလှုပ်ရှားတယ် သူလဲဘာမှမပြောဘူး ကျနော်လဲအတင့်ရဲလာတယ် လက်နဲ့တို့ကြည့်တယ် ကိုင်ကြည့်တယ်ဘာမှမပြောဘူးသူက ဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားတာဗျကျနော်လဲအခြေအနေကောင်းတယ်လို့တွေးမိပြီး ပေါ်နေတဲ့သူခါးစပ်လေးကို လက်နဲ့ပွတ်ကြည့်တယ် သူကနောက်ကိုတိုးလာတယ် ကျနော်လဲသူ့ဘောင်းဘီထဲကို လက်နှိုက်တယ် ဖင်လေးကိုပွတ်တယ် အရသာရှိလိုက်တာ နုညံ့လိုက်တဲ့ဖင် ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ အဲဇာတ်လမ်းကပြီးသွားပါရောမီးဖွင့်လိုက်တော့ လူတွေထကြတာပေါ့ကျနော်လဲသူ့ကိုကပ်ပြောလိုက်တယ် ညီစကားပြောရအောင်လို့ဟုတ်(အသံတွေတုန်နေတယ် ရင်ခုန်နေတယ်ထင်ပါ့)လတော့သာနေတယ်အပြင်မှာလေ ပြန်လာတယ်ပေ့ါသူ့အိမ်က ကျနော့အိမ်နဲ့နီးတယ်လေကျနော့အိမ်နားရောက်တော့ ခြုံပုတ်နားမှာ ကျနော်က ညီ ကိုသေးပေါက်အုံးမယ်ဟုတ်ညီလဲပေါက်အုံးမယ်ကျနော်သေးမပေါက်ချင်ပါဘူးလိမ်လိုက်တာ သူက မတ်တပ်လေးရပ်ပြီးသေးပေါက်နေတယ် သေးကထွက်မလာပါဘူးတော်တော်နဲ့ကျနော်လည်းသူ့နောက်က ကပ်ရပ်ပြီးသူကို အနမ်းမိုးခြွေလိုက်တယ် သူဖီးလ်တက်လာတယ် ကျနော်လဲသူ့ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုပြီး ဖင်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပွတ်တယ် တစ်ဖက်က နို့လေးတွေကိုချေတယ်ပွတ်တယ် အ အ အ (သူဖီးလ်တက်နေပြီပေါ့)ကျနော်လဲအချိန်မဆွဲတော့ဘူးညီ ကုန်းလိုက်သူကုန်းလိုက်တယ်ကျနော်သူ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်တယ်ဝိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး မိုက်တယ်ကွာဖင်လေးက ဖွေးဥနေတာပဲလရောင်ကြောင့်သူဖင်ဖွေးဖွေးလေးကိုမြင်ပြီးကျနော့လီးက အစွမ်းကုန်ထောင်မတ်လာတယ် အစ်ကို နာမှာကြောက်တယ်အာာာာာာာာာာ မနာစေရဘူးစိတ်ချ ကျနော် လီးကို တံတွေးများများစွတ်လိုက်တယ် သူ့စအိုဝကိုလဲ တံတွေးတွေစွတ်လိုက်တယ် သူ့ဖင်ပေါက်လေးကို လီးနဲ့တေ့ပြီး အသာလေးညှောင့်ကြည့်လိုက်တယ်အိုးးးးးးးးးးးးး တင်းကျပ်နေတာပဲ ဖင်လေးကပါကင်လေးကိုဗျ အသာဆွဲရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်း ဒစ်မြှုပ်သွားတယ် ထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်တယ်ဖြေးဖြေးချင်းပေါ့ဝင်သွားပြီးတစ်ချောင်းလုံးအားးးးးးးးးးး ကောင်းလိုက်တာ ညီ နာလားဟင့်အင်းအစ်ကို စိတ်ကိုလျော့ထားနော်ပါးစပ်နဲ့အသက်ကို၀၀ရှူဟုတ်ကျနော် သူ့ခါးလေးကိုကိုင်ပြီး ဆယ်ချက် ဆယ့်ငါးချက်လောက်စောင့်တယ်ကောင်းလိုက်တာဗျာညီ မှောက်လိုက်နော်ဟုတ် သူမြက်ခင်းပေါ်မှာမှောက်လိုက်တယ် ကျနော်လဲသူ့ပေါ်ခွပြီး ဖင်ဖြူဖြူပါးပါးလေးကိုဖြဲလိုက်တယ်သူ့စအိုဝလေးကို တေ့ပြီး လိုးလိုက်တယ်ဗျာာာာာာာဝိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဖီလ်လင်ပဲ ကျနော်လဲမှောက်ရက်လိုက်ဆွဲလိုက်တယ် အားးးးးးးးးးး အားးးးးး ကောင်းလိုက်တာဗျာာာာာာာာာာ 15 မိနစ်လောက်ဆွဲလိုက်တယ် ကျနော်ပြီးသွားတယ်သူက မေးတယ်အစ်ကိုရော ဖင်ခံဖူးလားအင်းဘာဖြစ်လို့လဲညီလဲလိုးချင်လို့အစ်ကိုဖင်ကိုအေးရတယ်လေးလိုပေါ့ သူ့လီးကိုကြည့်လိုက်တယ် သူ့လီးက5လက်မလောက်ရှိတယ်ဖွေးဥနေတာပဲ ကျနော်လဲရတယ်ပေါ့လိုးပေါ့ဗျာာာာာာာာာာ အကြိုက်ပေါ့သူက အစ်ကိုကုန်းလိုက်တဲ့ကျနော်လဲလေးဘက်ကုန်းပေးလိုက်တယ်သူက ကျနော့နောက်တည့်တည့်မှာနေရာယူရင်း ကျနော်စအိုကို သူ့လီးဖြူဖြူလေးနဲ့တေ့တယ် ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းတယ် အိုးးးးးးးးးးးးးး ကောင်းလိုက်တာဗျာသူက ကျနော့ခါးကိုကိုင်ပြီးဆွဲတယ် သူလဲ 15 မိနစ်လောက်နေတော့ပြီးသွားတယ် ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လုံးပြုံးလို့ပေါ့ ချွေးတွေလဲပြန်လို့ နောက်တော့ သူနဲ့ တစ်ပါတ် တစ်လ3ခါလောက်ဆွဲဖြစ်ကြတယ် တစ်ယောက်တစ်လှည့်ပေါ့နောက်နေ့မှသိရတာ သူ့ဖင်စအိုလေးကို ပန်းသွေးရောင်ထနေတာပဲဗျာ ကုန်းစုပ်ချင်စရာလေးလီးထိပ်က ပန်းသွေးရောင်လေးပဲ ကျနော်နောက်ပိုင်းမှာသူ့လီးကိုပါစုပ်ပေးဖြစ်တယ် ကျနော်ဘ၀ရဲနိဗ္ဗာန်ဘုံလေးပျောက်ဆုံးနေတာကြာပါပြီးဗျာာာာာာာာာာ သူက ရန်ကုန်ကိုအလုပ်သွားလုပ်နေလေရဲ့မျိုးဇော်ရေ မှတ်မိသေးရင် kaungthant1987@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပါအုံးကွာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ... Posted by
ကိုယ်တွေ့(၁) သူ့နာမည်က ဒိန်းဒေါင် အသားက ခပ်လတ်လတ် အသက်က 15 ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တယ်ပေါ့ သူ့မှာထူးခြားတာက ဖင်ပဲ ဟုတ်တယ်သူ့ဖင်လေးက လုံးကျစ်ပြီးနောက်ကိုကောက်နေတာ အဲမေ့သွားလို့ ကျနော်ကကောင်းသန့်ပေါ့ အသက် 26 လေ၊ လူကတော့ခပ်ပိန်ပိန်ခပ်ပါးပါးပဲ ၊အသားကတော့ဝင်းတယ် ကျနော့အလုပ်က နေ့စားစာရေးပေါ့ ရုံးတစ်ရုံးမှာ အဲဒိ ဒိန်းဒေါင်ဆိုတဲ့ကလေးက အဲ့ဒိရုံးက ၀န်ထမ်းသားလေးပေါ့ သူ့မှာအစ်ကိုအစ်မတွေနဲ့ ညီတွေညီမလေးတွေရှိပါတယ် အဲ့ဒိရုံးက ကျနော့အိမ်နဲ့ နဲနဲဝေးတယ် ၇ မိုင်သာသာလောက်သွားရတာပေါ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ပေါ့ဗျာ ကဲပေကြောရှည်တယ်စမယ် အဲ့ရုံးမှာကျနော်အလုပ်လုပ်ရတော့ သူ့အဖေကနေတစ်ဆင့်သူနဲ့ခင်သွားတာပေါ့ သူက ရုံးထဲလဲလာတတ်တယ် လာရင်သူက ရုံးကတန်းလျားပေါ်မှာ မှောက်ရက်လေးနေနေတတ်တယ် အဲ့အချိန်ဆိုသူကိုကြည့်ပြီး ကျနော့မှာ ပြစ်မှားလိုက်ရတာ သူ့ဖင်လေးကမှောက်ရက်အိပ်လိုက်တော့နောက်ကို ပိုပြီးကော့နေတာပဲ လိုးချင်စရာပေါ့ အဲလိုနေရင်း တစ်နေ့ အဲ့မြို့ပေါ်မှာဘုရားပဲရှိတယ်ဗျ သူက ကျနော့ကို အစ်ကိုဒီညဒီအိပ်ပါလား ဘုရားပွဲ လည်ရအောင်တဲ့ ကျနော်လဲ အေး မင်းကိုနဲ့လာအိပ်မှာလား (အဲဒိရုံးတွင် ရံဖန်ရံခါ ကျနော်ညအိပ်ညနေ နေရသဖြင့် ကျနော့အခန်းတွင်အိပ်ရာလိပ်ထားထားပါသည်)ဟုတ်တဲ့ အေးဒါဆိုကိုအိပ်မှာပေါ့ညကျပွဲဈေးတန်းလျှောက်လည်တာပေါ့ ညရောက်ပီပေါ့ဗျာ ဒါနဲ့ပွဲဈေးတန်းလျှောက်လည် မုန့်စား တော်တော်ကြာတော့ ကျနော်က ညီကိုဘီယာသောက်အုံးမယ်စောင့်ပေးအုံးလို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ညီလဲသောက်ကြည့်ချင်တယ် အင်မင်းကမသောက်ဘူးပဲ မသောက်ပါနဲ့လို့ပြောတော့ညီသောက်ဖူးတယ်တဲ့ အေးပေါ့တစ်ခွက်တော့ယေက်ပေါ့ပြောပြီး ကျနော်က သုံးခွက်သူက တစ်ခွက်ပေါ့ သူရစ်သီရစ်သီဖြစ်လာတော့ကျတော်က ပြန်မယ်ပြောပြီးခေါ်လာတယ် ည 11 နာပေါ့ သူက အိမ်မပြန်တော့ဘူးအစ်ကုိ့အခန်းမှာအိပ်မှာနော်ရတယ်မို့လား ရတယ်လေ ညီရာ အဲဒါနဲ့ကျနော့်အခန်းရောက်တော့သူကအိပ်ယာခင်းပေးပြီး အိပ်စေတယ် ကျနော်ကတော့ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပြီး ဖူးကားထိုင်ကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာ ကောင်းမှကောင်းဇာတ်လမ်းထဲမှာက ကောင်က ကောင်မဖြူဖြူကြီးရဲ့ဖင်ကိုလိုးနေတာဗျာ အရှိန်တတ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ အဲ့အချိန်မှာ ဘသားချောက မှောက်ရက်အိပ်ရင်းကျနေကြည်နေတဲ့ကွန်ပျူတာဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးကြည့်နေတယ် ပါးစပ်ကလဲမေးတယ် အစ်ကိုဖင်လိုးတာကောင်းလားတဲ့ ကောင်းမှာပေါ့လို့ပြောတော့ ဖင်ခံတာရောကောင်းလားတဲ့ သိဘူးလေ မင်ခံကြည့်ချင်လို့လားလို့မေးတော့ အဟဲတဲ့ ဒါဆိုအခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့ ဒါနဲ့ကျနော်လဲ စက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီး မီးမှိတ်လိုက်တယ် အခြားအခန်းက မီးရောင်ကတော့ဟပ်နေတယ်ပေါ့ သူနားမှာအိပ်ပြီးသူဖင်ကိုပွတ်ကာ သွေးတိုးစမ်းကြည့်တယ် ပါးစပ်ကလဲပြောတယ် မင်းဖင်လေးကလုံးကျစ်ပြီးကောက်နေတာပဲ စော်ဖင်လေးကျနေတာပဲ လိုးရရင်ကောင်းမှာပဲပြောတော့ သူကဘာမှပြန်မပြောဘူး ကျနော်လဲသူမပြောတာနဲ့ဖင်လေးကိုပွတ်ရင်းပွတ်ရင်းအတွင်းသူဝတ်ထားတဲ့ကွာတားဘောင်းဘီတိုလေးထဲထိ လက်ကိုသွင်းပြီးပွတ်လိုက်တယ် ကောင်းလားမေးတော့ကောင်းတယ် ခံမလား နာမှာကြောက်တယ် အာမနာစေရဘူး ဖင်ကိုတံတွေးစွပ်ပြီးချမယ်လေး အင်းဖြည်းဖြည်လုပ်နော်တဲ့ အင်း အစ်ကိုမင်းပေါ်ကတက်ခွမယ်နော်မှောက်ရက်ပဲနေ ကျနော်ပြောပြောဆိုနဲ့ ပုဆိုးကိုချွတ်ပြီးသူ့ပေါ်တက်ခွ သူ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်တော့ ၀င်းနေတာပဲ ဖင်က ကျနော်လီးက အဆမတန်တောင်နေပြီး သူ့ဖင်ဝင်းဝင်းလေးကိုအသာဖြဲ တံတွေတွေ ထွေးချပြီး ဖင်ပေါက်လေးကို အသာတေ့ကာ ညောင့်ကြည့်လိုက်တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လိုးရင်းလိုးရင်းတော်တော် စီးပိုင်တဲ့အထိတွေ့ကိုခံစားရတယ် လိုးရတာကောင်းချက်ဗျာာာာာာာာာ သူ့ကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေ ခွေးလိုးသလိုလိုးတယ် ခါးကိုကိုင်ပြီးစောင့်တယ်အရှိန်လေးရလာတော့ ကောင်းလားညီး ဟုတ် အင်းးးးးးးးးး ရှီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ကုတင်စောင်းမှာကုန်းခိုင်းတယ် နောက်ကနေတေ့ပြီးလိုးတယ်ကောင်းလိုက်တာဗျာာာာာ နောက်ပိုင်းသူ့ဖင်လေးကို တစ်ပါတ်နှစ်ခါလောက်စားရတယ် အခုတော့ သူလဲအလုပ်ဝင်သွားပြီးမလိုးရတော့ဘူးပေ့ါဗျာာာာာာာာာာ ဒါပေမဲ့တစ်ခြားဇာတ်လမ်းတွေရှိပါသေးတယ် မရေးတတ်ရေးတတ်နဲ့ရေးတာမို့ဇာတ်ကြောရှည်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါဗျာာာာာာာာာာာာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ... Posted by
Reactions: ခြင်ထောင်လဲ ဂွင်းထု
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ... Posted by
Reactions: VZO sex
လူမြင်ကွင်းမှာ အိပ်နေရင်းလီးတောင်တာမြင်ဖူးလား။ တွေ့ ရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး burmesegay@gmail.com ကိုသာပို့လိုက် တင်ပေးမယ်
အများသုံးအိမ်​သာထဲဂီင်းထုဖူးလား ဒါ​လေးက၂ပ်ိုင်းရှိတယ်​တပိုင်းကိုစမ်းတင်​ကြည့်​မယ်​ ကြိုက်​မှဆက်​တင်​​တော့မယ်​ လိုးတဲ့ကားတွေ ကြည့်ပြီး လီးတောင်နေပီ။ထုလိုက်​တာ လ​ရေ​တွေကို ပန်းထွက်​​ရောဗျာ။
- မပို့ဖြစ်​တာကြာလို့ ပို့လိုက်​တယ်​။ ​ဘော်​ဒါ​တွေ စိတ်​၀င်​စားရင်​ အ​ကောင့်​ထားခဲ့ပါ။ add လိုက်​မယ်​။ လီးက​တော့ နည်းနည်းကြီးတယ်​။ ကခ...
အဲ့ဒီကောင်လေးကို စသိခဲ့တာ အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုမှာပေါ့… အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အခုလိုမိုဘိုင်းအင်တာနက်တော့ သိပ်မပေါများသေးတော့ အပြင်ကအင်တာနက်ဆိုင်တေ...
myanmargays.blogspot.com ဆိုဒ်မှာ သူများတွေ မလေးရှား ဇာတ်လမ်းတွေ
တင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ဇာတ်လမ်းလေး ပြောပြချင်လာတယ်။ ဒီလိုဗျ
သူနာမည်က မျိုးဇော် ကျနော်နဲ့တစ်ရွာတည်းသားပေါ့ အသားဖြူဖြူ၊ နဲနဲပိန်တယ် သူ့မှာအစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိတယ် ကျနော်နဲ့ဆို သူကငယ်တယ် ၄ နှစ်လောက်ပေါ့ သူနဲ...
ပျင်းနေတာနဲ့လီးဆော့လိုက်တာ ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဗျာ။ ကူညီကြပါဦး
ပျင်းနေတာနဲ့ ကိုယ့်လီးကို ဆော့လိုက်တာ။ တောင်လာပြီး လန့်တောင်ယူရတယ်။ ဂွင်းထုပြီးတာတောင် ဒီလိုဖြစ်နေသေးတယ်ဗျို့ ။ မနွဲ့တဲ့ချစ်​သူလိုချင်​တယ်​တဲ့
လိုးတဲ့ကားတွေ ကြည့်ပြီး လီးတောင်နေပီ။ထုလိုက်​တာ လ​...
အောက်ဖော်ပြပါလူတွေထဲက ဘယ်သူတွေနှင့် လိင်ဆက်ဆံဖူးသလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါနေရာတွေထဲက ဘယ်နေရာတွေမှာ ဂွင်းထု/ ဖင်ချ / ဖင်ခံ / လီးစုပ်ဖူးလဲ ?
မိမိ Email ထဲ အသစ်တင်တိုင်းပို့စေချင်ရင်